အဘယ်သူသည်, အဘယျသို့, ဘယ်အချိန်မှာ (နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်အဘယ်ကြောင့်)? လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏အတွေ့အကြုံသည်လိင်ဆန္ဒ၊ ပိုမိုနှစ်သက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တို့နှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သည် (၂၀၁၂) - Your Brain On Porn
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2012 ဖေဖော်ဝါရီ; 41 (1):31-62. doi: 10.1007/s10508-012-9935-5.
Pfaus JG1, Kippin TE, Coria-Avila GA, Gelez H ကို, Afonso VM က, အစ္စမေးလ် N ကို, Parada M က.
လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူကို ဦး နှောက်အတွင်းရှိဟော်မုန်းနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာလုပ်ရပ်များဖြင့်ထိန်းချုပ်သော်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကတိရိစ္ဆာန်များအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်ပလာဗေးနီးယားအသင်းအဖွဲ့များကိုဖွဲ့စည်းရန်နှင့်လိင်ဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှု၏အားကိုညွှန်ပြသည်။ ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်အတွေ့အကြုံသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများဖွံ့ဖြိုးမှုကိုမည်သို့သန်စွမ်းစေကြောင်းနှင့်ကြွက်များအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေပြုထားသည့်နေရာနှင့်မိတ်ဖက်ကြိုက်နှစ်သက်ရာများကိုမည်သို့ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကြွက်နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်လုံးကြွက်များတွင်, ကြားနေသို့မဟုတ်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေအနံ့နှင့်အတူရနံ့မိတ်ဖက်များနှင့်အတူအစောပိုင်းလိင်အတွေ့အကြုံနောက်ဆက်တွဲရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှုများတွင်ရနံ့မိတ်ဖက်များအတွက် preference ကိုသွေးဆောင်။ ထို ဦး စားပေးမှုများသည် opiioid သို့မဟုတ် oxytocin receptors များ၏ဆေးဝါးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်လိင်မှုနှိုးဆွပေးသောလိင်ဆိုင်ရာဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံကြောဓာတုဖြစ်စဉ်များအတွက်“ မတ်တပ်ရပ်” နိုင်သည်ကိုညွှန်ပြသောရနံ့အမျိုးသမီးများအတွက်ကြွက်၏ပထမ ဦး ဆုံးထိတွေ့မှုနှင့်အတူမော်ဖင်းအကိုက်သို့မဟုတ်အောက်တိုတိုကင်းထိုးဆေးများကြောင့်လည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ အေးစက်နေသောနေရာ (သို့) လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ ဦး စားပေးမှုကို opioid receptor antagonist naloxone ကပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်နှင့်တွဲဖက်သော somatosensory cue (rodent jacket) သည်ကြွက်များတွင်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့်ကြက်များနှင့်ကြွက်များသည်တွဲဖက်ထားသောကြွက်များနှင့်ဆက်စပ်နေသောပြdramနာများပြသနေသည်။ ကျနော်တို့ endogenous opioid activation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်ခန့်မှန်းကြောင်းတွေကို၏ရှေ့မှောက်တွင်လည်း hypothalamic နှင့် mesolimbic dopamine စနစ်များကို sensitizes သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏အခြေခံဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင်းအဆိုပြုထား။ သူများသည်စနစ်များကိုအာရုံစူးစိုက်အာရုံစူးစိုက်ခြင်း, ဆုလာဘ် -related လှုံ့ဆော်မှုဆီသို့ရည်မှန်းချက် - ညွှန်ကြားထားအပြုအမူကိုသက်ဝင်ဖို့လုပ်ဆောင်ရန်။ ထို့ကြောင့်လိင်မှုဆိုင်ရာဆုလာဘ်များနှင့်ဆက်နွယ်သော“ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမြေပုံ” (သို့) အင်္ဂါရပ်များ၊ လှုပ်ရှားမှုများ၊ ခံစားချက်များနှင့်လူ့အသွင်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုများကို Gestalt ဖန်တီးသည့်လူတစ် ဦး ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအရအရေးကြီးသောအချိန်ကာလတစ်ခုတည်ရှိသည်။